Shiinaha skaanka iskudhafka salka loogu talagalay ringlock, kabadhka ama qaabka H iwm iwm warshad iyo shirkado | Zhongming
Waxaan ka caawineynaa adduunka sii kordhaya tan iyo 1998
Taageerada emaylka iibinta1@cn-zhongming.com iibinta6@cn-zhongming.com
Wac Taageero +86 158 6737 8966 +86 183 9586 8099
Qaab aluminium ah
Qaab caag ah
63 # qaab dhismeed bir ah
63.5 # qaab dhismeed bir ah
120 # qaab dhismeed bir ah
H Nidaamka Beam
H20 Dhirta Geed
Wareegtada Wareegta Ringlock
Isku dhejinta jajabka
Qalabka Taakulaynta Birta
Aluminium adag oo aluminium ah
U madaxa & Jack salka
saldhig Jack scaffolding for ringlock, koob ama H fra ...
Shaxda la hagaajin karo ee caaga ah
Qaab dhismeedka Caaga Wareegga Wareegga
Qiimaha ugu hooseeya ee Isku-dhejinta Birta H Mashiinka - CupLoc ...
Dhismaha Dhismayaasha - CupLock Wareejinta R ...
Qiimaha jumlada 2020 Ku marooji Saldhig la hagaajin karo - S ...
Qaab-wareejinta Khadka Tooska ah ee Dhoofiye Qaadaha - PLYW ...
Guddi Qaab-dhismeed Qaab ah - Wareeg Elliptic Wareeg Pla ...
Qiimaha ugu Fiican ee Loogu Sameeyo Dharka - Wareegtada Elliptic Co ...
Tayada Sare Birta la taaban karo - 63.5 # steel f ...
saldhig jaakad scaffolding for ringlock, cuplock ama H jir iwm
FOB Qiimaha: US $ 0.5 - 9,999 / Cadad
Tirada Min.Order: 100 Gabal / Cadad
Kartida Bixinta: 10000 Cadad / Cadad Bishii
Codsiga saldhigga jaakada: Waxaa loo adeegsadaa tuubooyin bir ah iyo iskudhafyo geedi socodka dhismaha si loo hagaajiyo dhererka jajabka iyo qaab dhismeedka dhuumaha, isku dheelitirka culeyska miisaanka, iyo rar qaadista. Waxaa inta badan loo isticmaalaa habka dhismaha ee shubista shubka dhismaha. Horumarka degdegga ah ee hantida maguurtada ah iyo gaadiidka saddex-geesoodka ah sanadihii la soo dhaafay, qadarka taageerada saqafka ayaa sidoo kale sameysay horumar deg deg ah.
Kala soocida qalabka dhismaha:
1. Marka loo eego qaybta la isticmaalay, waxaa loo qaybin karaa taageero sare iyo taageero hoose
Support Taageerada kore waxaa loo isticmaalaa dhamaadka sare ee biibiilaha birta, jiifku wuxuu ku yaalaa dhamaadka sare, shaamkuna wuxuu leeyahay dabool;
SupportTaageerada hoose waxaa loo isticmaalaa dhamaadka hoose ee biibiile birta ah ee dhismaha mashruuca dhismaha, jiifku wuxuu ku yaalaa qaybta hoose, shaseena lama laaban karo;
2. Marka loo eego maaddada falka, waxaa loo qaybin karaa laba nooc: jaakad godan iyo jaakad adag. Wareegga hogaanka ee jaakada godan wuxuu ka sameysan yahay tuubbo bir ah oo gidaar adag leh, oo qafiif ah; jaakada adag waxay ka samaysan tahay bir wareegsan, taas oo ka culus.
3. Iyadoo la raacayo inay leedo leedahay iyo in kale, waxaa loo qaybin karaa: taageerada kore ee caadiga ah iyo taayirka sare ee lugta. Jeegaannada taayirrada leh guud ahaan waa la jarjaray waxaana loo isticmaalaa qaybta hoose ee kaartoonka la dhaqaajin karo si loo fududeeyo kor u qaadista habka dhismaha; jaakadaha caadiga ah waxaa loo isticmaalaa dhismaha dhismayaasha injineernimada si ay u taageeraan xasilloonida.
4. Marka loo eego habka wax soo saarka ee fur, jaakada adag waxaa loo qaybin karaa fur kulul iyo roog qabow. Furka kulul ee duuban wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan oo qaali ka yar; fur qabow-duudduuban ayaa leh muuqaal quruxsan oo ka yar qiimo jaban.
Qaabeynta furitaanka dhismaha, habka wax soo saarka ee soo saarayaasha meelo kala duwan ayaa la mid ah, qaabeynta ayaa ka duwan, qaabeynta waxaa lagu kala sooci karaa shan dhinac:
1) Chassis: Dhumucda iyo xajmiga jiifku way ku kala duwan yihiin gobollada iyo soosaarayaasha kala duwan.
2) Xoojinta feeraha: Haddii ay jiraan feeraha xoojinaya qaybta isku xireysa usha fur iyo jiiska, guud ahaan marka la eego shuruudaha mashruuca, taageerada dheer ee kore ee falka waxay si toos ah ugu qalabaysan yihiin feeraha xoojinta, iyo taageerada hoose ee gaagaaban waa dhif qalabaysan.
3) Dhererka xariggu guud ahaan waa 40 ilaa 70, dhumucda furku guud ahaan waa φ28, φ30, φ32, φ34, φ38mm.
4) Waxaa jira laba hanaan wax soo saar oo loogu talagalay hagaajinta lowska lagu qalabeeyo taageerada: birta iyo birta oo la shaabadeeyo qaybo. Lowska Nooc kasta oo qamandiga isku hagaajiya wuxuu leeyahay cabir fudud ama culus. Waxaa jira laba nooc oo qaabab lowska ah: lowska baaquli iyo baalasha wareega
Fengqi Rd, Degmada Yinzhou, Ningbo City, Zhejiang, CHINA
Noocyada Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedyada La Taaban karo ...
09,09,20June 16, 2017
War wanaagsan oo ku saabsan aluminium sameynta
Ku lifaaqan qalabka wax lagu qoro
Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Iskuxidhka Birta Cuplock, Kwikstage Qalabka Isboortiga,